Hordhac iyo adeegsiga mashiinka wax gubaya ee nooca mashiinka lagu ridayo
Maxaad Noogu Doorataa soo-saareha mashiinka ololaya rasaasta.
by admin 20-07-15
Dubia Waxay Dib U Furaysaa Dalxiisayaasha
Dib u furista Dubai ee Dalxiisayaasha Dubai ayaa ku dhawaaqay todobaadkan inay dib u fureen dalxiis. Laakiin wali ma cadda inta soo booqdayaasha shisheeyaha ahi soo noqon doonaan maadaama dalal badani wali la halgamayaan sidii loo joojin lahaa faafitaanka coronavirus. Magaalada ku taal dalka Isutagga Imaaraatka Carabtu waxay si xoogan ugu tiirsan tahay dalxiisayaasha si ay wax u ...
Maanta, Wuhan ayaa dib loo bilaabay
waxaa maamula 20-03-15
Maanta, Wuhan waxaa si rasmi ah loo oggol yahay inuu furo, kadib 76 maalmood ayaa la xiray. Taariikhda rasmiga ah ee xiritaanka Wuhan waa 10-ka subaxnimo 23-ka Janaayo 2020. Laakiin nasiib wanaag, waxaa jira dib-u-gurasho aan cabsi lahayn, oo ay ku jiraan dadaalkooda cabsi-gelinta iyo naf-goosadnimada iyo ...
War wanaagsan! Saaxiibbada qaaliga ah, sideeddan waddan oo Yurub ku yaal ayaa isu diyaarinaya inay soo afjaraan xannibaadda
waxaa maamula 20-03-06
Tan iyo markii ay wadamada yurub bilaabeen inay cadeeyaan xiritaanka wadanka, goorta la xakamayn karo, waxay bilaabeen inay dib u bilaabaan wax soo saarkii, marka suuqa uu sifiican u shaqeyn doono ayaa noqday mid ay dadku aad u danaynayaan. Gaar ahaan dadkayaga ganacsiga shisheeye ayaa ka walaac qaba dhibaatada. Sidii dhawaanta ...
Waa kuwee noocyada mashiinada ololaya rasaasta oo ku habboon adeegsadayaasha? Waxay kuxirantahay cabirka shaqada iyo wax soo saarka.
Waxa jira dhowr qaabayn oo kaladuwan oo ah mashiinka rasaasta toogashada. Kala-saarista qaab-dhismeedku waxay u qaybsan tahay sida ku xardhan qalabka xardiyaha, dhisma walbana wuxuu leeyahay shaqadiisa u gaarka ah. Tusaale: Tuubbooyin yar-yar oo dhexdhexaad ah oo isku-dhegan ayaa ku habboon nooca durbaanka ama nooca silsiladda; F ...
Mashiinka ololka rasaasta, Mashiinka Shot Benty, Shot Benty Wheel, Shot Benty Turbine, toogashada Qaybo ka mid ah Xaraashka, toogtay Mashiinka Peening, Dhamaan Alaabada